Dolphin gold stellar jackpots bụ a 5 ukwu mobile ohere mpere free bonus game keere na 40 paylines na ịkụ nzọ ókè nke 48p ka £ 60 kwa atụ ogho. A mara mma mmiri n'okpuru osimiri isiokwu na yi ruby ​​na miri-acha anụnụ anụnụ oké osimiri mmiri bụ backdrop nke a oghere egwuregwu. Gịnị na-eme isiokwu iyi ọzọ kwesịrị bụ ụda nke mmiri mgbali, mmiri na ebili mmiri n'elu oké osimiri na mmiri na-egosipụta. E nwekwara ole na ole animated seahorses na-ebili na-edoghi nke egosipụta. Ha nwere akuku anọ kama atọ na ọtụtụ ohere mpere. Ọ-eme ka ụzọ maka ihe elu-uru na akara na-eme ka nnukwu Enwee Mmeri.
Banyere Mmepụta nke dolphin Gold apụta jackpots:
Nke a anya ụtọ mobile ohere mpere free bonus game e mepụtara site NYX (ibelata Box), a okike Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ na-emepụta ọtụtụ ohere mpere na pụrụ iche themes. All ha egwuregwu na-enye fun na ntụrụndụ na ndị nnukwu ohere nke na-emeri ego
Nke a magburu onwe mobile ohere mpere free bonus egwuregwu na-egwuri na ụfọdụ mara mma na akara na ona theme.Electric ray, n'elu na-akwụ ụgwọ na akara na 500 ugboro gị ahụhụ ya, 1000 ugboro gị eto mgbe egosi na anụ sochiri oké osimiri mbe, nkeewa akara azụ, ruby, na seahorse bụ isi ihe nnọchianya nke egwuregwu. 9 site na K si akpọ kaadị bụ ala uru na akara na-enye 25 ugboro ahụhụ ise akara landings na abụọ n'ahịrị. Blue na gold Azụ dolphin bụ abụọ bonus nnọchianya nke egwuregwu na-enye dị iche iche bonus Enwee Mmeri.
Wild & ikposa: Blue dolphin bụ anụ akara nakwa dị ka ikposa nnọchianya nke egwuregwu a. Dị ka a ọhịa, ọ na-egosi na-esi anwụde 2, 3 & 4 na-ekpuchi ihe niile na-na akara ma e wezụga ikposa. Atọ ma ọ bụ karịa ọdịdị ọhịa akpali free spins si 3 spins na 21 spins mgbe 6 ka 12 akara egosi na ebe ọ bụ na anụ ọhịa na-egosi na a stacked guzobere, ruo 12 bụ mfe omume na-eme gị ohere nke na-free spins mfe.
Golden dolphin: Gold dolphin na a mobile ohere mpere free bonus game bụ nke abụọ anụ ọhịa akara na-egosi na n'oge na-free spins. The akụkụ kasị mma na nke a bụ onye ahụ na-esi anwụde 2, 3, 4 & 5 eme ka ndị ọzọ free spins na anụ-enweta nkwanye na o kwere omume n'oge free egwuregwu. Nke a na akara nọ n'ọnọdụ niile akara ma e wezụga-acha anụnụ anụnụ dolphin ọhịa.
Dabere na isiokwu nke a serene aquatic ụwa, a mobile ohere mpere free bonus game bụ maa a ụdị oghere na ihe free spins na free spins na-ihe dị mfe ụzọ na ndị nnukwu Enwee Mmeri.